Izindaba - Iyini i-Rotary Airlock Valve futhi isetshenziselwa ini
1.Iyini i-airlock rotary valve
Amavalvu e-Airlock rotary asetshenziswa ezindaweni zokusebenzelana zokuphatha izinto eziqinile, ngokuvamile lapho kudingekile ukuhlukanisa izindawo ezingu-2 ngaphansi kwezimo ezihlukene (ingcindezi isikhathi esiningi) kuyilapho kudedelwa okuqinile ukusuka kwesinye isimo kuye kwesinye.
Ama-valve ajikelezayo, avame ukubizwa ngokuthi ama-valve enkanyezi, ngakho-ke asetshenziswa ekuqaleni nasekupheleni kokuthutha umoya. Bavumela ukuletha okuqinile kusuka endaweni yokucindezela okuphansi kuya endaweni yokucindezela okuphansi ekuqaleni komugqa ngenkathi besiza ukukhipha okuqinile ekugelezeni komoya a ukuphela komugqa.
Ama-valve anjalo ayakwazi ukwenza i-dosing enzima, ngakho-ke, angaphinde afakwe njengemishini yokudosa, nakuba kungewona umkhuba omuhle.
Kunezinhlobo ezi-2 zamavalvu ajikelezayo e-airlock: i-drop through type kanye ne- blow through type. Zombili lezi zinhlobo ngokuyisisekelo zinikeza imiphumela efanayo, noma kunjalo, indlela ezikwenza ngayo nezici zazo zihluke kancane.
Ama-Airlock feeders asetshenziswa kakhulu embonini futhi asetshenziswa kulezi zindawo ezilandelayo:
- Izimboni zokudla (zokubhaka, ubisi, ikhofi, okusanhlamvu)
- Ukwakhiwa (usimende, itiyela)
- Amandla (izitshalo zamandla)
- Amakhemikhali / Petrochemicals / Polymers
Izimiso zokusebenza ze-Rotary feeders kanye nokucaciswa okuyinhloko kunikezwe ngezansi.
2. Yehlisa Ngevalvu ejikelezayo bese Ushaya Ngevalvu ejikelezayo
Yehlisa Ngevalvu ejikelezayo ye-airlock
Ama-valve ajikelezayo e-airlock “awisa” umkhiqizo epayipini noma emishinini engezansi. Kukhona i-flange yokungena kanye ne-outlet flange.
Vuthela ngevalvu ejikelezayo ye-airlock
Amavalvu enkanyezi axhumeke ngqo emugqeni wokudlulisa. Ngakho-ke, umoya osetshenziswa emugqeni wokudlulisa udlula ngqo kuma-alveoles, ushanele umkhiqizo.
Ngokuvamile, ukushaywa ngama-valve asetshenziswa noma lapho kunobude obulinganiselwe kakhulu noma lapho umkhiqizo unokuthambekela kokunamathela ngaphakathi kwe-rotor. Kwezinye izinhlelo zokusebenza, imodeli eyehlayo ikhethwa kakhulu.
Ukuba ne-rotor ngokuqondile ekugelezeni kwepayipi kungaholela ekuqhekekeni okukhulu komkhiqizo ohanjiswayo, ikakhulukazi uma ukwehla okuningana ngama-valve kuchungechunge lwamapayipi afanayo. Kulesi simo, ama-valve okwehla angase acatshangelwe ukuze kulondolozwe umkhiqizo.
3. I-Star Valve Clearance kanye nokutholwa kothintana naye
Amavalvu enkanyezi ngokuvamile anemvume encane kakhulu phakathi kwama-rotor blades kanye ne-stator, kuyadingeka ukuze kuhlinzekwe ukuvala komoya phakathi kwezindawo ezikhuphuka nomfula ezingekho ngaphansi kwengcindezi efanayo.
Ukucaciswa okujwayelekile kwamavalvu ajikelezayo e-airlock kungu-0.1 mm futhi kuvame ukuhluka ukusuka ku-0.05mm kuye ku-0.25 mm kuye ngesevisi elindelekile yevalvu (umehluko omkhulu wokucindezela ohlangothini ngalunye lwevalvu noma cha). Lesi yisici esincane kakhulu esichaza ukuthi ama-valve ajikelezayo avame ukuhlupheka ngenxa yokuthinta i-rotor / stator. Ithebula elilandelayo lifinyeza izimbangela ezivamile zoxhumana nabo.
4. Ukuvikelwa kokuqhuma
I-airlock ejikelezayo ingasetshenziswa njenge-elementi yokuhlukanisa ukuvimbela ukuqhuma kothuli ukuze kusakazeke ekufakeni. Ngalokhu, ivalvu ejikelezayo ye-airlock kufanele iqinisekiswe ukuthi imelana nokuqhuma kanye nokuvikela ilangabi.
Ukuze uthole lezo zici, i-valve kufanele yakhelwe ngendlela yokuthi:
- Umzimba ne-rotor ingakwazi ukumelana nokucindezela kokuqhuma - ngokuvamile i-10 bar g
- Ithiphu yokususa izindwani / indlu kufanele ibe ngaphansi kuka-0.2 mm
- Okungenani ama-blade ama-2 ohlangothini ngalunye lwe-valve kufanele axhumane nendlu (okusho ukuthi inani eliphelele lama-blades kufanele libe > noma lilingane no-8
5. I-Rotary Valve Degassing
Ukuvunyelwa okuphansi kuzovumela ukuvaleka okuhle futhi kunciphise ukuvuza kwevalvu ye-airlock ejikelezayo. Noma kunjalo, ukuvuza okuncishisiwe kuzokwenzeka. Futhi, umoya obanjwe ephaketheni ngalinye uzophinde ukhululwe lapho iphakethe livulwa endaweni yokucindezela okuphansi. Lokhu kuholela ekuvuzeni komoya.
Ukuvuza komoya kuyanda ngokuhluka kwengcindezi futhi kukhuphuka ngesivinini sokujikeleza kwe-valve. Kungaba yingozi kakhulu ekusebenzeni kwe-valve, ikakhulukazi nge-powder ekhanyayo, njengoba umoya okhishwe empeleni uzokhipha i-powder futhi uvimbele ukugcwalisa iphakethe.
Lesi sigameko singafakazelwa kumajika okusebenza kwama-airlock rotary blades : umthamo uzofinyelela ku-assymptot futhi uze wehle ngesivinini esikhulu njengoba amaphakethe engasakwazi ukugcwaliswa umkhiqizo, afakwe uketshezi kakhulu ukuze abe nesikhathi sokuwela emaphaketheni.
Ukuze ulawule lesi sigameko futhi uthuthukise ukusebenza kwe-valve, kufanele kusetshenziswe umoya ofanele we-valve ejikelezayo. Ishaneli yokukhipha umoya ifakwa ohlangothini lapho amaphakethe abuyela phezulu ukuze awathulule emoyeni ngaphambi kokuthi athathe umkhiqizo omusha. Isiteshi sithumela umoya kusihlungi ukuze sikhishwe.
6. Izibalo zedizayini ye-Airlock rotary valve (usayizi)
Ukubalwa komthamo we-valve yenkanyezi ukuze kuzuzwe umphumela onikeziwe kuwumsebenzi wobubanzi be-valve yenkanyezi, isivinini sawo sokuzungezisa okuhlosiwe kanye nemvelo yomkhiqizo,
- Uma i-valve yenkanyezi inkulu, ukuphakama kuzoba namandla.
- Isivinini esikhulu sokuzungeza ngokuvamile sisho ukuphuma okuthe xaxa kodwa ukuphuma kuzoyeka ukudlula isivinini esithile
- Uma uketshezi luthe xaxa impushana, i-output izoba phezulu, lapho futhi imikhiqizo elula kakhulu izodala umkhawulo ku-output ngesivinini esithile sokuzungezisa I- throughput ingalinganiselwa ku-abascus yomhlinzeki, kodwa ulwazi lomkhiqizo luyoba okokufaka okubalulekile. .
7. Izinkinga ezivamile ngamavalvu e-airlock rotary
Izinkinga ezahlukene zingathinta i-valve yenkanyezi ngesikhathi sokusebenza kwayo. Izinkinga ezijwayelekile ziphakathi kwalokhu okulandelayo:
- Ukusebenza ngaphansi komklamo (ukusebenza okuphansi kunokulindelekile)
- Ukulimala kokuxhumana kwensimbi / kwensimbi
8. Igayidi yokuthenga i-Airlock rotary valve - Ungakhetha kanjani ivalvu ejikelezayo ye-airlock
I-Airlock rotary valve iyathengiswa : Ukuthenga ivalvu ejikelezayo entsha
Lapho uthola i-airlock rotary valve entsha yemboni yakho, le mibuzo elandelayo idinga ukubuzwa ukuze uthenge imininingwane efanele:
●Ingabe idizayini yevalvu ejikelezayo ye-airlock ingcono uma uphefumula noma ukwehla ?
●Ingabe udinga impahla ekhethekile (isibonelo insimbi engagqwali) noma ukusetshenziswa okujwayelekile kwanele ?
●Yini i-output oyidingayo futhi ingakanani ukuminyana kwenqwaba yezinto okufanele icutshungulwe, izonikeza ububanzi be-valve
●Ingabe i-valve ifakwe ekushiseni? Ingabe idinga ukuvunyelwa kwe-rotor stator ethile?
●Ingabe i-valve idla umugqa wokudlulisa umoya ? Ingabe idinga i-degassing?
●Ingabe sikhona isidingo sokufinyelela njalo ukuze kuhlanzwe ngaphakathi kwevalvu?
●Ingabe impushana egelezayo ayinayo noma ama-blade athile kanye nokwakheka kwephakethe kuyadingeka ?
●Ingabe ivalvu ejikelezayo ye-airlock idinga ukuqinisekiswa ukuze isetshenziswe endaweni eqhuma uthuli? Uma kunjalo, yikuphi ukuhlukaniswa kwendawo okufanele kucatshangelwe ngaphakathi naseduze kwevalvu?
●Ingabe i-valve idinga ukumelana nokuqhuma (imvamisa amabha ayi-10) ?
Uma unesidingo samavalvu e-rotary airlock nama-diverter emigqeni yokudlulisa umoya, sicela ukhululeke ukusithinta.
Isikhathi sokuthumela: Aug-14-2021
i-rotary feeder, I-3 Way Ball Valve, I-Electronic Control Valve, i-valve ejikelezayo, I-3-Way Diverter Valve, i-valve ye-airlock,